METFP – MTEFPLS : Famoahana mpiofana sy fanomezana mari-panofanana – METFP
METFP – MTEFPLS : Famoahana mpiofana sy fanomezana mari-panofanana
« Mivoatra ny hodidina sy ny fahaiza-manao takiana maneran-tany, noho izany ilaina ny famolavolàna fandaharam-panofanana sy ny lasi-panofanana mifanaraka amin’izany » hoy Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, tetsy amin’ny Don Bosco Ivato.
Nasiany tsindrim-peo manokana ny fanatsaràna ny fanofanana hifanaraka amin’ny fivoaran’ny teknolojia, nandritry ny lanonana fanolorana mari-panofanana ireo mpanao asa-tanana miisa 50, ny Alakamisy 05 may 2022.
Niofana nandritry ny 20 andro izy ireo hahafehy ny fanoratana sy ny fandrafetana ny fandaharam-panofanana sy ny lasi-panofanana, izay fiaraha-miasa amin’ny Ministeran’ny asa-tanana sy « Fonds Malagasy pour la Formation Professionnelle » (FMFP).
Mpanofana matihanina, manana fahalalàna sy fahaiza-manao manokana momba ny asa tanana ireto « Maître Artisan » andiany MANJAKALANITRA ireto; ary ho mpitarika amin’ny fandresen-dahatra ireo mpisehatra samihafa mahakasika ny Fanofanana arak’asa .
Ankoatr’izay dia tsy adinon-dRamatoa Ministra ny nandrisika ireo mpiofana hirotsaka ao amin’ny » Viviers des Formateurs » amin’ny lafiny asa-tanana.
« Olo mahay raha , tsy very mandeha »
©️SCOM METFP/ May 2022